☼ I-Lina Friendly finca enendawo yokubhukuda & ingadi enhle - I-Airbnb
☼ I-Lina Friendly finca enendawo yokubhukuda & ingadi enhle
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Ideal Property Mallorca
U-Ideal Property Mallorca unokuphawula okungu-1601 kwezinye izindawo.
I-finca encane enhle yezwe, enefenisha entofontofo ye-Majorcan, ethule kakhulu, kude nokuvakasha okuningi phakathi nezihlahla ze-alimondi nezithelo, imema iholide elinokuphumula okuphelele!
Indlu inamakamelo angu-2, igumbi lokugezela negumbi lokuhlala elivulekile, indawo yomlilo ethokomele ene-satellite Smart TV nekhishi elihlanganisiwe, elikhulu futhi elinakho konke okudingekayo. Ihlinzekwa ngamandla elanga anele.
Endlini encane yasemaphandleni imindeni enethezekile enezingane noma abantu abadala abangaba ngu-4 ingahlalisa abantu. Ngaphandle kunethala elikhulu elimboziwe elinendawo yokosa inyama nendawo yokubhukuda enkulu 4x8m. Jabulela ukuphumula ngokuzivalela eceleni kwe-Mallorcan finca enhle!
Idolobhana elincane lendabuko lase-Mallorcan lase-Búger litholakala emagqumeni amabili, onqenqemeni lwendawo enezimbali yomoya e-Horta de Sa Pobla. Amakhilomitha ambalwa entshonalanga iqala njengokungafani okuhlaba umxhwele, i-Sierra Tramuntana, izintaba eziphakanyisiwe (ezinokuphakama okungaphezu kuka-1400m) kuyo yonke inyakatho-ntshonalanga ye-Mallorca. Isiqalo esihle kubaqwali bezintaba. Amabhishi aseduze ase-Port Pollença nase-Port Alcúdia, okungamakhilomitha angu-15. Amakhilomitha ambalwa ukusuka e-Búger yiwo kuphela atholakale ngo-1945 stalactite emihumeni yase-Campanet. I-Búger inikeza amabha athokomele, izindawo zokudlela nezitolo. I-plaza encane phambi kwesonto ledolobhana yindawo yokuhlangana yabantu bendawo. Usuku lwemakethe luyiMigqibelo.
Ibungazwe ngu-Ideal Property Mallorca
Kuyinjabulo yethu ukukusiza ekuhleleni nasekubhukheni indawo yakho yokuhlala eholidini kanye nokuhamba nawe eholidini lakho elilandelayo e-Mallorca. Sifuna yonke into ikwanelise ngokuphelele. Ngalokhu siyatholakala futhi endaweni ngesikhathi sokuhlala kwakho amahora angama-24 ngosuku kuwe.
Kuyinjabulo yethu ukukusiza ekuhleleni nasekubhukheni indawo yakho yokuhlala eholidini kanye nokuhamba nawe eholidini lakho elilandelayo e-Mallorca. Sifuna yonke into ikwanelise ng…
Inombolo yepholisi: ET 2736